Isitudiyo i-Yatri - Ikhaya Lethu Lokutshona Kwelanga * Nciphisa Iintsholongwane * - I-Airbnb
Isitudiyo i-Yatri - Ikhaya Lethu Lokutshona Kwelanga * Nciphisa Iintsholongwane *
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguPeeush
Indawo yethu yokuhlala entle, iYatri Studio, igcinwe kumgangatho ophezulu wesakhiwo ibe kumgangatho ophakamileyo; ivulela ukutshona kwelanga okumangalisayo kunye nendawo eluhlaza.
Le ndawo yinxalenye yedolophu ehoywe kakuhle kwisixeko saseVrindavan.
Le dolophu ikwindawo entle, kwaye ikufutshane nazo zonke iitempile ezinkulu ezifana ne-ISKCON, iBanke Bihari Ji, kunye nePrem Mandir.
Kukho indawo yokupaka eyaneleyo ejikeleze isakhiwo kunye nemarike ekufutshane kakhulu nezidingo zemihla ngemihla.
Ikhaya lethu elixhotyiswe kakuhle liye lakhuthaza abantu endihamba nabo ibe liyilwe kakuhle ngomoya wokuhamba nangokomoya. Indawana nganye kunye nekona yekhaya lethu zibonakala ngokufudumeleyo kwiinkcukacha ezincinci; ubutofotofo bakho kunye nolonwabo zezona njongo ziphambili apha. Le ndawo inazo zonke izinto ezinokusetyenziswa zale mihla.
I-Yatri Studio inebhalkhoni encinci yendlu eluhlaza evulekela ukutshona kwelanga okuthandekayo. Inefenitshala epheleleyo kunye nebhedi enkulu elala abantu ababini kunye nendawo yokuhlala etofotofo, inendawo yokugcina ukutya encinci kunye nayo yonke into oyifunayo.
- Iketile yombane eneti ephambili.
- I-Exquisite Khurja potter - Isixhobo sokukhupha amanzi somthonyama
Inegumbi lokuhlambela elineshawara nezinto zokuthambisa ezifanelekileyo. Indawo entle yokuhlala ukuze uphole uze utye ukutya okumuncis 'iintupha yindawo ebalaseleyo yesitudiyo.
Ezinye izinto zokuzonwabisa ziquka..
- Isipikha sethu se-bluetooth ukuze sijonge kumculo oqhelekileyo kunye
ne-soothing bhajans - Ikona enazo zonke izinto ozidingayo ukuze udlale, wenze i-yoga uze ucingisise. Ukukhankanya ngokukhethekileyo izixhobo zethu ze-badminton ukuze ukwazi ukudlala kwipaki eluhlaza ecaleni kwesakhiwo.
- Itafile yethu ye-Social Scrabble yenza iincoko ezimnandi.
- Ishelfu encinci yeencwadi eneencwadi ezininzi ezikhuthazayo nenolonwabo
- iiTV ne-wifi zikhona, kodwa singathanda ukuba uzihlole ezinye izinto ezivuselelayo ekhayeni lethu.
Isidlo Sakusasa Esincomekayo ngokuqinisekileyo 'sinikezela NGEENKWENKWEZI'. Isidlo sethu sakusasa sabantu abangayityiyo inyama senziwe ekhaya, senziwe ngomama ngesithako esicocekileyo: uthando kwaye luza kwenza uncume ebusweni. Iti yangokuhlwa isendlini.
'Isidlo sasemini nesangokuhlwa', unoku-oda kwimenyu yethu ephithizelayo.
- Ixesha lokubhalisa xa ufika ngu-2 emva kwemini
- Ixesha lokuphuma ngu-12 emini. Nceda usazise xa uphuma kwiiyure ezimbalwa kwangaphambili ukuze sikwazi ukulungiselela nokunciphisa iintsholongwane kwindawo yokufika kondwendwe lwethu olulandelayo.
- Ngokomthetho waseIndiya, kuza kufuneka siqokelele ikopi yepaspoti kunye ne-visa yeendwendwe ezingezizo zaseIndiya kunye nesazisi seendwendwe zaseIndiya.
Ezinye izinto ofanele uzazi:
- Indawo enombane efakiweyo.
- Ukutya okuthunyelwa ekhaya kwiivenkile zokutyela ezithandwayo e.
Kwindawo yethu encinci, ungamamela intliziyo yakho, ufunde okanye udlale, uhambise i-atri efihliweyo kuwe uze ubuke iVrindavan ngokupheleleyo. Indalo kunye nobunzima zininzi apha kwaye singathanda ukuba uhambe unomtsalane kwaye unqwenela ukusityelela kwakhona. Yiza uze usityelele kwaye usenokusikelelwa nguShri Shri Banke Bihariji kwisixeko saseVrindavan.
26" HDTV ene-intambo yepremiyamu
Umbuki zindwendwe ngu- Peeush
Sihlala kufutshane kwidolophu enye ibe siza kuhlala sikhona ukuze sikukhokele size sikuncede ngazo zonke iindlela ezinokwenzeka. Xa ufika, siza kukunceda ungene kwaye siza kukubonisa indawo kunye nayo yonke into efunekayo ukuze uhlale kamnandi.
Sihlala kufutshane kwidolophu enye ibe siza kuhlala sikhona ukuze sikukhokele size sikuncede ngazo zonke iindlela ezinokwenzeka. Xa ufika, siza kukunceda ungene kwaye siza kukuboni…